Tuesday, 30 November 2010 09:29	नागरिक
काठमाडौं, मंसिर १४ (नागरिक)- संविधानसभाको म्याद थप भएको ६ महिनाको अवधिमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभएको बताउँदै राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष अप्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार साँझ शीतल निवासमा भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति यादवले थप गरिएको बाँकी ६ महिना त्यसै गरी खेर नजाओस् भनी प्रधानमन्त्री नेपालमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएका छन्।
राष्ट्रपति यादवले बाँकी ६ महिनाको अवधिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
उनले फेरि समयावधि थप गर्ने कुरा दलहरूबीच स्वीकार्य हुन नसक्ने सम्भावना औल्याउँदै दलहरूलाई गम्भीर बन्न सचेत गराएका हुन्। एक बर्ष थप गरिएको संविधानसभाको म्याद मंगलबारदेखि ठीक ६ महिनाको लागि मात्रै छ।
'संविधानसभाको म्याद थप भएको भोलि (मंसिर १४ गते) ठीक छ महिना पुग्दैछ। अब बाँकी रहेको ६ महिनाको अवधिमा तपाईहरुले गम्भीर कुराकानी गरेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको थिए। तर, त्यस्तो नपाउँदा अफसोच लागेको छ', राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको म्याद थप गरिएको विगत ६ महिनाको अवधिका माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुर्नस्थापना नभएको, शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति हुन नसकेको, संविधान निर्माण कार्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको र पाँच महिनासम्म पनि ब्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेकोमा गम्भीर चासो र चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघु पन्तले पनि संविधानसभाको म्याद थपेको ६ महिना पुग्दा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा केही प्रगति नभएको बताउँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। 'दलहरुले गम्भीर भएर निकास दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको आसय थियो', पन्तले भने।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु गम्भीर नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको आशंका राष्ट्रपति यादवको थियो। 'प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणलाई गम्भीर रुपले नलिएको हो कि भन्ने शंका राष्ट्रपतिलाई परेको छ। त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीसँग ब्यक्त गर्नुभएको हो', दाहालले भने।
स्रोतको भनाईमा राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री नेपालसँग संविधान निर्माण, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, संसद अधिवेशन र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। 'संसदले प्रधानमन्त्री छनौट गर्न सकिरहेको छैन, यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ? अनमिनको समयावधि सकिएपछि क्यान्टोनमेन्ट र लडाकुको विषय के हुन्छ?', राष्ट्रपति यादवको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो। अध्यादेशवाट वजेट ल्याएको प्रसंग उठाउदै राष्ट्रपति यादवले संभावित संसद अधिवेशनको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री नेपालले भने आफुले सहमतिको लागि पद छाडेको र अहिले पनि दलहरुवीच समझदारीको प्रयत्न गरिरहेको जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरुवीच न्युनतम सहमति भए संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने बताएको उनका राजनीतिक सल्लाहकार रघु पन्तले जानकारी दिए। 'दलहरुवीच सहमति भयो भने संसद अधिवेशन वोलाउन तयार छु', प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै पन्तले भने, 'सहमतिविना अधिवेशन वोलउदा झन् द्धन्द वढने संभावना रहन्छ।' प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको जानकारी पनि गराएका थिए।
रुस भ्रमणवाट फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री नेपाल कम्वोडिया र वेल्जियमको भ्रमण गर्न लागेकोमा पनि राष्ट्रपति यादवले घुमाउरो ढंगले अप्रसन्नता ब्यक्त गरेको स्रोत बताउछ। 'दलहरूबीच गम्भीर वार्ता भएर प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने सोचेको थिएँ, (तपाईं) फेरि बाहिर जान लाग्नुभएको रहेछ। शान्ति र संविधानप्रति गम्भीर भइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो', प्रधानमन्त्री नेपालले आफनो विदेश भ्रमणको 'ब्रिफिङ' गर्ने वित्तिकै राष्ट्रपति यादवले भनेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
बाघ सम्मेलनमा सहभागी भई मंसीर ९ गते रुसवाट फर्किएका प्रधानमन्त्री नेपाल एसियाली राजनीतिक दलहरूको संगठन (आइक्याप) को अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन १४ गते कम्वोडिया जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री नेपाल त्यतैवाट वेल्जियममा हुने अति कम विकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिएर २४ गते मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री नेपालले आफू आइक्यापको संस्थापक सदस्य भएको, दक्षिण एसियाबाट आफू एक्लो संस्थापक सदस्य रहेको र नेपालले नेतृत्व दिइरहेका कारण पनि कम्बोडिया भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। त्यस्तै ब्रसेल्समा हुन लागेको अति कम विकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलनको अध्यक्ष भएका कारण त्यसतर्फ जान लागेको प्रष्टीकरण पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए।
'दलहरूले सहमति गरेर संसद अधिवेशन आह्ान गर्ने वातावरण भए म जुनसुकै बेला पनि भ्रमण छोट्याएर आउछु', प्रधानमन्त्री नेपालको भनाई थियो। पालुङटारको विस्तारित वैठकले मिलाउन नसकेको विषय माओवादीले केन्द्रीय समितिबाट टुंगो लगाउने भनेको र त्यसका लागि केही दिन लाग्ने जानकारी दिएको पनि प्रधानमन्त्री नेपालले बताएका थिए। 'माओवादीको आन्तरिक विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि दलहरुवीच सहमतिको लागि केही दिन लाग्ने संभावना छ', प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए।
विदेश नगए रमाइलो कहाँ हुन्छ र? देशको सम्पत्ति कसरी खर्च गर्ने? देशलाई जे सुकै होस् के मतलब? बस अफू संसार घुम्न पाएकै छन्। होइन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीज्यू? मोज गर्नुस् किनकि अझै सरकार बन्ने मेसो मिलेको छैन।